FITAKIAN’NY SMM : « Tsy anjaran’ny sendika no manala ahy amin’ ny toerako”, hoy ny minisitry ny Fitsarana
Misavorovoro tanteraka ny eny anivon’ny Fitsarana ankehitriny. Misy tsy fifankahazoana sy tsy fitovian-kevitra eo amin’ny Sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM) sy ny minisitra mpitahiry ny fitombokasem-panjakana. 9 mars 2018
Anisany tsoa-kevitra nivoaka taorian’ilay fivoriam-be nataon’ny SMM, ny talata lasa teo ny fangatahan’izy ireo an-kolaka ny tokony hanoloana ny minisitry ny Fitsarana am-perin’asa. Nitaky ihany koa izy ireo olom-baovao hitantana ny minisiteran’ny Fitsarana. Nambaran’ny teo anivon’ny sendikan’ny mpitsara fa tokony ho olona mahalala tsara ny maharary sy ny tontolon’ny Fitsarana no handray an-tanana ny minisitera.
Tsy niandry ela fa namaly bontana avy hatrany io fitakian’ny Sendikan’ny mpitsara izao ny minisitra voakasika, Rasolo Elise Alexandrine. Raha fehezina dia valin-teny tsotra sady mazava no nambarany tamin’izany izay nilazany fa tsy anjaran’ny sendika velively no manala azy eo amin’ny toerany fa izay nanendry azy ihany no tokony hanana fahefana hanao izany.
“Ny minisitry ny Fitsarana dia andraikitra politika. Ny Filoham-pirenena no nanendry azy teo amin’ny toerany dia izy ihany no tompon’andraikitra amin’ny fanalana azy fa tsy andraikitry ny sendika angamba izany amiko”, hoy ny valiteny mahitsy sy hetintra nomen’ny minisitry ny Fitsarana.
Hihetsika koa ny mpandraharahan’ny fonja
Ankoatra izay mbola mitana ny sain’ny mpanara-baovao ny mahakasika ilay raharaha Houcine Arfa. Olona misehatra eo anivon’ny Fitsarana maromaro no voatonontonona tamin’ity raharaha ity, anisan’izany ny fisiana mpitsara iray ary ihany koa ny sekretera jeneralin’ny fandraharahana ny fonja. Manoloana ity farany indrindra dia fantatra fa hisy ny fivoriam-be hataon’ny sendikan’ny mpandraha-rahan’ny fonja amin’ny 13 marsa ho avy izao.
Mandritra an’io fivoriana io entin’izy ireo handinihana akaiky ny momba an’ity tranga ity ary hoentina handinihana ihany koa ireo olana maro sendrain’ny mpandraharahan’ny fonja amin’izao fotoana izao. “Tsy hoe ny mahakasika ny sekretera jeneralin’ny mpandraharahan’ny fonja io ihany no jerenay fa hisy ihany koa ny fijerena ireo olana hafa, anisan’izany ohatra ny resaka tambin-karama ary mbola misy amin’ireo namany sasany no tavela any amin’ny fonjan’Ankazobe”, hoy ny fanazavana avy amin’ny mpikambana eo anivon’ny sendika. Hatreto dia mbola handrasana fatratra izay mety ho tohin’ity raharaha Houcine Arfa ity, sy izay valin’ny fanadihadiana hataon’ireo tompon’ andraikitra.